काठमाण्डाै । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल थप उपचारका लागि भारत लगिएको छ । भारतको नयाँ दिल्लीस्थित एपोलो अस्पतालमा उनको उपचार गरिनेछ । उनलाई दिउँसो १२ बजेको नेपाल एयरलाइन्समा दिल्ली लगिएको हो । लगातार ज्वरो आएसँगै सास फेर्न गाह्रो भएपछि उनलाई दुई दिन अघि नर्भिक अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरिएको थियो ।
त्यसपछि नर्भिकको विशेष वार्डमा राखेर उनको उपचार जारी राखिएको थियो । उपचारमा संलग्न चिकित्सहरुकाअनुसार उनको फोक्सोमा पानी जमेको देखिएको थियो । फोक्सोमा पानी जमेका कारण अक्सिजनको कमी देखिएको थियो । उनलाई निरन्तर अक्सिजनकै सपोर्टमा राखिएको थियो ।
उनमा ज्वरो उल्लेख्य घट्न सकेको थिएन । पिसाब तथा रगतमा समेत ‘इन्फेक्सन’ देखिएको थियो । अस्पतालका अनुसार उनलाई मंगलबार एक पिन्ट रगत समेत दिइएको थियो । हेमोग्लोबिनको मात्रा कमी देखिएपछि रगत चढाइएको थियो । दुई पिन्ट रगत चढाउने योजना बनेको भए पनि शरीरले सपोर्ट नगरेपछि एक पिन्ट मात्र रगत चढाइएको थियो ।
नेता खनालको निरन्तर खोकी र शरीर शिथिल भएको अस्पतालले जनाएको छ । चिकित्सकहरुले कोभिड हुँदा उनलाई निमोनियाको समस्या देखिएको र सो समस्या फेरि बल्झिएको समेत आशंका गरेका छन् ।
नेता खनालमा मृगौलाको समस्याबाट हुने लक्षण र कोभिडपछि देखिने लक्षणहरु देखिएको उपचारमा संलग्न चेस्ट फिजिसियन डा. ब्रजेन्द्र श्रीवास्तवले बताएका छन् । डा. श्रीवास्तवका अनुसार खनालको रगत र पिसाबमा समेत इन्फेक्सन देखिएको थियो।